समर्पित सर्भरहरू: कसरी तपाइँको विशेष केसको लागि सहि छनौट गर्ने लिनक्सबाट
इसहाक | | अन्य
इन्टरनेट, तपाइँलाई थाहा छ, ती सबै वेब पृष्ठहरू र सेवाहरूको वेबको साथ, केही इत्यादि छैन। यो मूर्त चीज हो र यो फेला पर्‍यो सर्भरहरूमा होस्ट गरिएको। र, जसरी तपाईले बहुमूल्य वस्तु कहिँ छोड्नुहुन्न, तपाईले बेवास्ता गर्नु हुँदैन जहाँ तपाईले आफ्नो वेब प्लेटफर्म होस्ट गर्नु हुन्छ। तसर्थ, तपाइँ त्यहाँ राम्रो समर्पित सर्भर थाहा हुनु पर्छ।
त्यहाँ धेरै छन् समर्पित सर्भर प्रदायकहरु, सेवाहरू र विभिन्न दरहरूको भीडको साथ। यसले छनौटलाई गाह्रो बनाउँछ, त्यसैले तपाइँ तपाइँको विशेष केसको लागि सबै भन्दा राम्रो एक छनौट गर्न सक्षम हुन सबै विवरणहरू थाहा पाउनु पर्छ र यसैले यसको अधिक प्राप्त गर्नुहोस् ...
1 समर्पित सर्भरहरू के हुन्?
1.1 समर्पित होस्टिंग बनाम समर्पित सर्भर
1.2 डिजिटल संक्रमणको महत्त्व
1.3 लाभ र हानि
1.3.1 त्यसोभए के मैले एउटा सर्वर सेयर गर्नु पर्छ?
2 कसरी एउटा समर्पित सर्भर छनौट गर्न
2.1 GDPR को महत्व
समर्पित सर्भरहरू के हुन्?
होस्टिंग छनौट गर्दा, वा होस्टिंग गर्दा, जब तपाईंलाई क्लाउडमा वेब पृष्ठ / सेवा अपलोड गर्न खाली ठाउँ चाहिन्छ, सबैभन्दा धेरै बारम्बार प्रश्नहरू मध्ये एक के हो थाहा पाउनुपर्दछ समर्पित सर्भर। यो स्पष्ट हुनु उत्तम कम्पनी र वेब होस्ट सेवा छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ, बहिष्कृत गर्न र तपाईंको वेब स्थानको राम्रो नियन्त्रणको अनुमति दिँदै।
समर्पित सर्भरहरू हुन् धेरै पूर्ण र विशेष विकल्प व्यक्ति, फ्रीलांसरहरू र कम्पनीहरूको लागि वेब होस्टिंग खोज्दै। यस कारणले गर्दा, तिनीहरू आज एक धेरै माग गरिएको ढाँचा हो।
स्पष्ट रूपमा योaको जस्तै देखिन्छ साझा गरिएको सर्भर, तर छैन। साझा गरिएको सर्भरमा, उही सर्भर धेरै ग्राहकहरूको लागि साझेदारी गरिएको छ। अर्को शब्दहरुमा, ती सबै ग्राहक साइटहरु उही कम्प्युटरमा उहि हार्डवेयर संसाधनहरु प्रयोग गर्दैछन्।
सेयर गरिएका वेब सर्भरहरू केही खास साइटहरूको लागि उपभोग हुन सक्छन् केही स्रोतहरू र ती साना छन्। तर यदि तिनीहरू हुर्कन्छन् वा धेरै ठूला हुन्छन् भने, उत्तम विकल्प भनेको समर्पित वेब सर्भर हो। त्यो हो, जुनमा सर्भर वा मेसिन केवल एक खातामा समर्पित छ, सबै स्रोतहरूको आनन्द लिन सक्षम हुँदै।
शहरी सिमिल प्रयोग गरेर, समर्पित सर्भर तपाईको लागि घर भाडामा लिने जस्तो हो, जब कि साझा सर्भर साझा घर भएको जस्तो हुनेछ।
हालसालै साझा गरिएको र समर्पित सर्भर बिचको भिन्नता पातलो गरीएको छ, देखा पर्दा वीपीएस (वर्चुअल प्राइभ सर्भर), तपाई के गर्नुहुन्छ सबै ग्राहकहरुका लागि उही सर्भर प्रयोग गरीरहेको छ, जस्तै साझेदारी गरिएको, तर भर्चुअल मेसिनमा प्रत्येक स्वतन्त्र प्रोजेक्ट होस्ट गरेर समर्पितको फाइदाहरूका साथ।
यी प्रकारका सेवाहरू आज धेरै सामान्य छन्। तिनीहरूले विशाल डाटा केन्द्रहरू ग्राहकहरूको साथ विशाल मेसिन संसाधनहरू साझेदारी गर्न सक्षम गर्दछ। ताकि सबैलाई आफ्नो छ भर्चुअल स्पेस विशेष, यसको VRAM, vCPU, भर्चुअल भण्डारण, भर्चुअल नेटवर्क ईन्टरफेस, आदि को स्रोतहरूको साथ। यसले सेवा विस्तार गर्न र अधिक स्रोतहरू प्राप्त गर्न पनि सम्भव बनाउँदछ, भौतिक सर्भर परिवर्तन नगरीकन।
थप रूपमा, तिनीहरू अर्को प्रस्तुत गर्दछन् थप फाइदा, र यो यो हो कि यदि ती मध्ये कुनै एक VPS लाई भयो भने यसले बाँकीलाई असर गर्दैन। यो तथ्यलाई धन्यवाद छ कि, सबै ग्राहकहरूले एकै भौतिक मेसिन (सर्भर) प्रयोग गरिरहेको छ, वीपीएसको साथ संसाधनहरू विभाजन गरिएको छ धेरै भर्चुअल सर्भरहरू स्वतन्त्र मेशिनको रूपमा काम गर्दछन्, उनीहरूको स्रोतको वितरण, अपरेटिंग प्रणाली, सफ्टवेयर, आदि। ।
समर्पित होस्टिंग बनाम समर्पित सर्भर
कहिलेकाँही, केहि ग्राहकहरु लाई शंका छ यदि यो उही हो भने समर्पित होस्टिंग र एक समर्पित सर्भर। वास्तवमा, जब एक वा अर्को सेवा तपाईलाई प्रस्ताव गरिन्छ, तिनीहरू प्राय: समान चीजको सन्दर्भमा हुन्छन्, तिनीहरू पर्यायवाची प्रयोग गरिन्छ।
यद्यपि, हो हामी कडा छौं, समर्पित सर्भर ईन्टरनेटमा जोडिएको एक मेशिन हो जुन यसका ग्राहकहरूलाई केही प्रकारको सेवा प्रदान गर्न सक्दछ। यसको सट्टामा, होस्टिंगले सर्भर भित्र वेब होस्टिंगलाई विशेष रूपमा बुझाउँदछ। मैले पहिले पनि भनें, त्यो सर्भर भित्र धेरै होस्टिंगहरू होस्ट गर्न सकिन्छ यदि यो साझा गरिएको छ, वा यदि यो VPS मार्फत समर्पित छ भने।
हाल, केहि सेवाहरू क्लाउड कम्प्युटिङ तिनीहरू धेरै व्यापक छन्, र दुबै होस्टिंगका साथै अन्य सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछन्: कम्प्युटि,, अपरेटि systems प्रणाली र अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न रहन्छ, इत्यादि। (IaaS, सास, PaaS, ... हेर्नुहोस्)।
डिजिटल संक्रमणको महत्त्व
को आगमन अघि SARS-CoV-2 महामारी, कम्पनीहरूको डिजिटल रूपान्तरण धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। तर कोविड - १ after पछि, यो लगभग अब एक विकल्प, तर एक दायित्व हो। तपाईंको व्यवसायको सेवामा नयाँ टेक्नोलोजीहरू राख्नु लागत कम गर्न र नाफा सुधार गर्न सक्दछ।
र तपाईको स्वतन्त्र व्यापार, वा तपाइँको एसएमई मा परिवर्तन परिवर्तन गर्न को लागी पहिलो कदमहरु मध्ये एक वेबसाइट बनाउनु हो र यसको लागी आवास खोज्नु हो। यति मात्र तपाईं अब ती पुग्न नसक्ने सबै व्यक्तिहरूमा पुग्न थाल्नुहुनेछ तपाईंको सेवा वा उत्पादन। कि त तिनीहरू भौगोलिक रूपमा टाढा छन्, वा किनभने ती शारीरिक रूपमा प्रतिबन्धका कारण तपाईंको स्थापनामा जान सक्दैनन्।
अन्य फाइदाहरू यो संक्रमण को माध्यम ले:
तपाईं अधिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ डाटा र तथ्या .्क तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको बारेमा। यसले तपाईंलाई उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर राम्रोसँग जान्न अनुमति दिन्छ, राम्रो निर्णय लिन्छ, वा तपाईंको मार्केटिंग योजना कसरी सुधार गर्ने।
Digitization पनि संगठन सरलीकृत गर्दछ एक व्यवसाय को। तपाईं ई-वाणिज्य प्लेटफर्महरू, सहयोगी अनुप्रयोगहरू, इत्यादि धेरै प्रक्रियाहरू स्वत: धेरै सफ्टवेयर उपकरणहरूको एक समूहको साथ तपाईंको व्यापार अनलाईन व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
राम्रोसँग परिवर्तनमा अनुकूलन गर्नुहोस्, डाटा को वास्तविक समय संग्रह को लागी धन्यवाद। अग्रिम प्रतिक्रिया दिन यो क्षमता अनिश्चितता वा परिस्थितिमा जस्तै यो संकटको समयमा महत्वपूर्ण छ।
यसले कामको विकेंद्रीकरण गर्न र सुविधा पुर्‍याउँछ telecommuting.
कहिलेकाहीं एक स्थानीय बाट अपरेट गर्न को बेवास्ता गर्दछ, त्यसैले एक वेबसाइटले तपाईंलाई स्थापनाको भाँडा, बिजली बिल, पानी, फर्निचर, आदि बचाउन सक्दछ। यसले मूल्यमा पनि प्रभाव पार्छ, जुन लाभ मार्जिनमा ती खर्चहरू समावेश नगरीकन प्रतिस्पर्धी हुने छ।
अझ ठूलो पहुँच तपाईंको व्यवसाय को। जबकि तपाईं केवल आफ्नो व्यवसाय नजिकका नागरिकहरूमा पुग्नु भन्दा पहिले, अब तपाईं पूरै विश्वमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
यो तपाईंको कम्पनी को छवि सुधार र तपाईं हुनेछ धेरै सन्तुष्ट ग्राहकहरु सेवाहरूको साथ।
थप चपलता, नोकरशाही प्रक्रियाहरू घटाउँदै।
एक समर्पित सर्भर संग यसको छ फाइदाहरू र हानिहरू, लगभग कुनै पनि सेवा जस्तै।
यदि हामी उल्लेख गर्दछौं फाइदा, बाहिर खडा:
विशेषता: तपाईंले संसाधनहरू बाँडफाँड गर्नु पर्दैन, मेसिन तपाईंलाई पूर्ण समर्पित हुनेछ। यसले स्वतन्त्रता, स्केलेबिलिटी, र उच्च प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
नियन्त्रण: तपाईले चाहानु भएको सर्वर प्रबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरक्षा: अन्य प्रोजेक्टहरूसँग संसाधनहरू साझा नगरेमा, तपाईं केहि खतराहरू कम पर्नुहुनेछ।
रखरखाव: समर्पित सर्भर एक सरल रखरखाव छ, किनकि साझा सर्वर, वा VPS, केहि अधिक जटिल छन्।
लचीलापन: यो अधिक बहुमुखी छ, प्लेटफर्म र सामग्री प्रबन्धकहरूको एक विशाल संख्याको साथ, तपाईंलाई वास्तवमै चाहिने चीजको लागि ठाउँ र स्रोतहरू समर्पित गर्न सक्षम हुँदै। तपाईं अधिक स्वतन्त्रता संग सर्भर अपरेटिंग प्रणाली छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ...
पनि छ यसको बेफाइदाहरू:
मूल्य: समर्पित हुँदै तिनीहरू साझा होस्टिंग वा VPS सर्भरहरू भन्दा महँगो हुन्छन्। जे होस्, यो प्रस्ताव को लाभ को कारण यसको लायक छ।
कठिनाई: यदि तपाईं पूर्ण सर्भर प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग पर्याप्त प्रशिक्षण हुनुपर्छ। यद्यपि धेरै क्लाउड सेवाहरू प्राय: आधारभूत मर्मत र प्रशासनिक कार्यहरू तपाईंको लागि गर्छन्।
त्यसोभए के मैले एउटा सर्वर सेयर गर्नु पर्छ?
सामान्यतया, यदि तपाइँ केवल एउटा सानो वेबसाइट, ब्लग, वा थोरै ट्राफिकको साथ चाहानुहुन्छ भने, तपाइँसँग आवाश्यक छैन एक समर्पित सर्भर भाडामा लिनुहोस्। अर्कोतर्फ, समर्पित सर्भरहरू सेवा वेबसाइटहरू, अनलाइन स्टोरहरू, र ठूला क्षमताका साथ अन्य प्लेटफर्महरूको लागि उत्तम विकल्प हो (उच्च मात्रा, भ्रमणको संख्या वा उच्च डाटा ट्राफिक, ...)।
यो प्रोजेक्टहरूको लागि उपयुक्त छ कि सानो सुरु हुन सक्छ, तर हुन सक्छ धेरै बढ्नको लागि पूर्वानुमान। यसले दीर्घ-अवधि संसाधन अवरोधहरू सिर्जना गर्दैन।
कसरी एउटा समर्पित सर्भर छनौट गर्न
सर्भरaभन्दा बढि केहि छैन उच्च क्षमताको कम्प्युटर। त्यसकारण, जब तपाईं समर्पित सर्भरहरू छनौट गर्न जानुहुन्छ, तपाईंले मूल रूपमा उहि प्राविधिक पक्षहरूलाई हेर्नुपर्दछ जब तपाईं पीसी किन्नुहुन्छ।
CPU- सर्भरहरूमा सामान्यतया बहु माइक्रोप्रोसेसरहरू हुन्छन्, त्यो हो, बहु मुख्य ब्रेन। प्रदर्शन सर्भरमा होस्टिंग अपरेटिंग प्रणाली र सफ्टवेयर चलाउँदा तिनीहरूमा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण उनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्नु महत्वपूर्ण छ। VPS को मामला मा, यो एक VCPU हुनेछ, कि, भर्चुअल CPU।
र्याम मेमोरी: मुख्य मेमोरी पनि महत्त्वपूर्ण छ, चपलता जुन सबै चीजहरू यसमा निर्भर गर्दछ। ढिलो मेमोरी, उच्च विलंबता, वा कम क्षमताको साथ, सीपीयू आश्चर्य कार्य गर्न सक्षम हुनेछैन। आवश्यक पर्ने मात्रा प्रत्येक विशेष केसमा धेरै निर्भर गर्दछ, किनकि सबै ग्राहकहरूलाई एकै कुराको आवश्यक पर्दैन।
भण्डारण: हार्ड डिस्क अर्को आवश्यक हिस्सा हो। केही समर्पित सर्भरहरू अझै चुम्बकीय हार्ड ड्राइभहरू (HDDs) प्रयोग गर्छन्, जुन सुस्त हुनेछ, तर सामान्यतया उच्च क्षमताहरू हुन्छन्। अरूले धेरै उच्च गतिको साथ, ठोस राज्य हार्ड ड्राइव (SSDs) को उपयोग गर्न शुरू गरेका छन्। सामान्यतया, तपाईले कुनै पनि हालतमा विश्वसनीयताका बारे चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकी ती RAID प्रणाली प्रयोग गर्छन्। यी बेवास्ता प्रणालीको मतलब यो हो कि यदि एक डिस्क असफल भयो भने, यो डाटा हराउने बिना बदल्न सकिन्छ।
अपरेटिङ सिस्टम: यो विन्डोज सर्भर, वा केहि GNU / लिनक्स वितरण हुन सक्छ। दुर्लभ अवसरहरूमा तपाईं अन्य UNIX जस्तो प्रणालीहरूमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, जस्तै सोलारिस, * BSD, आदि। यसको मजबूती, सुरक्षा, र स्थिरताका कारण लिनक्स धेरैमा प्रबल छ, यसका साथै कम रखरखाव र प्रशासन आवश्यकताहरू छन्।
डाटा ट्रान्सफर- डाटाको भोल्यूमलाई सन्दर्भ गर्दछ जुन यी सर्भरहरूको नेटवर्कि lines लाइनहरूमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यो यस्तो कुरा हो जुन प्रदायकहरूले सामान्य रूपमा केही सेवाहरूमा सीमित गर्दछन्, वा उनीहरूसँग अन्य धेरै महँगोमा असीमित हुन्छ। कुनै पनि केसमा, तपाईलाई भ्रमण गर्ने वा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने चीजसँग यो समायोजित हुनुपर्छ।
अर्को प्रश्नहरू त्यो रुचि तपाईं यसलाई नियन्त्रण प्यानल प्रकार हो, वा अन्य सुविधाहरू जुन उनीहरूले प्रदान गर्न सक्नेछन्, जस्तै डोमेन पंजीकरण, ईमेल सेवाहरू, डाटाबेसहरू, इत्यादि।
GDPR को महत्व
तपाईंले पक्कै सुन्नुभयो GAIA- एक्स, क्लाउड प्लेटफर्मको लागि एक रमाईलो यूरोपीय परियोजना जुन मागहरूको पूरा गर्दछ यूरोपीय डाटा संरक्षण कानून। गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गर्न केहि महत्त्वपूर्ण कुरा र यूरोपियन क्षेत्रको डाटा राख्न (वा असफल, कि तिनीहरू पालना गर्छन् GDPR).
यदि व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण छ भने, यो अझ बढि छ संवेदनशील डाटा ह्यान्डल गर्दा कम्पनीमा, वा यसको ग्राहकहरुमा। समस्या यो हो कि यी कानूनहरूको पालना गर्ने र प्रतिस्पर्धी हुने सेवाहरू खोज्न गाह्रो छ। अझ बढि तथाकथित GAFAM (गुगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, र माईक्रोसफ्ट) को भारी प्रभाव र शक्ति विचार गर्दै।
होस्ट गरिएका समर्पित सर्भरहरू फेला पार्नुहोस् यूरोप भित्र डाटा केन्द्रहरूर प्रतिस्पर्धी हुनु सजिलो छैन। एउटा उदाहरण Ikoula हुन सक्छ।, वेब होस्टिंग, समर्पित सर्भर, र क्लाउड कम्प्युटिङ मा एक विशेषज्ञ। थप रूपमा, तिनीहरूसँग 1998 देखि व्यापक अनुभव छ।
तपाईंको डाटा केन्द्रहरू तिनीहरू फ्रान्समा छन्, रेम्स र एप्समा दुई स्थानहरूमा, साथै हल्याण्ड र जर्मनी (साथै युएसए र सिंगापुर पनि छन्, तर तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं प्राथमिकताहरू हुनुहुन्छ भने)। केन्द्रहरू जुन स्वामित्वमा छन्, र भाडामा गरिएका भूखंडहरू छैनन् जस्तो केहि अन्य सेवाहरूमा देखा पर्दछ। थप रूपमा, यो नेदरल्याण्ड र स्पेन मा सहायक छ। थप रूपमा, उनीहरूसँग तपाईंको २ disposal/24/२० बहुभाषी सहायता सेवा तपाईंको डिस्पोजलमा छ।
entre Ikoula सेवाहरू बाहिर खडा:
इलेक्ट्रोनिक मेल व्यावसायिक र वेब डोमेनहरू आफ्नै
SSL / TLS प्रमाणपत्रहरू सुरक्षाको लागि
साधारण इन्टरफेस व्यवस्थापन को लागी
यस बाहेक, तपाईं अन्य गुणहरूको लागि यो मनपर्नेछ जस्तै:
प्रयोग गर्नुहोस् खुला स्रोत र नि: शुल्क परियोजनाहरू Kubernetes जस्तै।
बन्नुहोस् पर्यावरण-उत्तरदायी, उनीहरूको डाटा केन्द्रहरूमा १००% नवीकरणीय उर्जा प्रयोग गरेर वातावरणको साथ बढी आदर गर्दै (याद गर्नुहोस् कि डाटा केन्द्रहरूले ठूलो मात्रामा उर्जा खान्छ, र यो महत्त्वपूर्ण छ)।
तिनीहरूले सुरूवात समर्थन गर्दछ, जुन राम्रो बढावा हुन सक्छ यदि तपाईं भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » अन्य » समर्पित सर्भरहरू: कसरी तपाइँको विशेष केसको लागि सहि छनौट गर्ने
CrowdSec: लिनक्स को लागी एक खुला स्रोत सहयोगी साइबरसुरक्षा परियोजना